युवा मन्त्रालयबारे युवालाई नै थाहा छैन ! – Everest Dainik – News from Nepal
युवा मन्त्रालयबारे युवालाई नै थाहा छैन !
काठमाडौं, कार्तिक १० । दशकअघि गठित युवा मन्त्रालयले हालसम्म ५ सय जनालाई युवा प्रतिभा र युवा उद्यमीको सम्मान दिइसकेको छ । ४७ युवा उद्यमीलाई शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा दुई लाख रुपैयाँ ऋण प्रवाह गरेको छ । तथ्यांकअनुसार वार्षिक पाँच लाख युवा श्रमबजारमा उत्रिन्छन् ।
अधिकांश युवालाई भने युवा मन्त्रालय र त्यसका कार्यक्रमबारे थाहै छैन । ‘युवा मन्त्रालय छ भन्ने सुनेको छु तर हाम्रा निम्ति के गर्छ थाहा छैन,’ पाटन संयुक्त क्याम्पसमा बीबीएस चौथो वर्षमा अध्ययनरत युवा विरास राई भन्छन् । मन्त्रालयअन्तर्गत युवा परिषद् रहेको र त्यहाँ राजनीतिक कार्यकर्ताले नियुक्ति पाउने सुनेको उनले बताए ।
सिंहदरबार हातामा रहेको मन्त्रालयले ‘राष्ट्रिय युवा नीति–२०६६’ निर्माण गरेको छ । उक्त नीति परिमार्जनसहित २०७२ मा युवा परिषद् गठन भएको छ भने दस वर्षे ‘युथ भिजन–२०२५’ निर्माण गरिएको छ । तर, अन्तर मन्त्रालय समन्वय हुन नसक्दा युवा नीति र युथ भिजन कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
मन्त्रालय युवाका समस्या तत्काल समाधान गर्ने निकायभन्दा पनि सरकारी ‘जागिर खाने थलो’ मात्र बनेको युवा अधिकारकर्मी बताउँछन् । ‘मुख्य रूपमा पाँच बुँदे सारलाई लिएर हामीले युथ भिजन तयार गर्‍यौं,’ युथ भिजन निर्माण कार्यदलका सदस्य प्रदीप परियार भन्छन्, ‘नेपाली युवाको आशा जगाउन युवा परिषद् बन्यो ।’
युथ भिजनले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, उद्यमशीलता, सीप विकास, सामाजिक सुरक्षा, सहभागिता, नेतृत्व विकास तथा खेलकुद र मनोरन्जनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । कान्तिपुरमा खबर छ ।
ट्याग्स: Youth Ministry